Gazette သဒင်း အမှောင်ခွင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » Gazette သဒင်း အမှောင်ခွင်း
Gazette သဒင်း အမှောင်ခွင်း
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Feb 27, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Community & Society | 16 comments
ရွှေပြည်သာ အလုပ်သမားသပိတ် ကြိုးကိုင်သူ နှစ်ဦးအား မြန်တျန့်တတ်မဒေါ် စောက်ထုံအဖွဲ့မှ စုံစမ်းဖမ်းမိဂဲ့ရာ မာမာနှင့် ဥုံတီဒါ ၂ဦးဖြစ်ကြောင်း သဒင်းထုပ်ပြန်သီ။
ကျောင်းသားသပိတ် ခေါင်းဆောင်အစစ်အား ထိုစောက်ထုံအဖွဲ့မှဗင် ဖော်ထုပ်လိုက်ရာ ပြည်ပတာဝံခံမှာ တလုပ်ပြည်ပိုင် ကျွန်းတဂျွန်းတွင် ဖောင်စီးယင်း ရေငတ်သူ မြက်ဏှာမည်းfoxပျံ နှင့် ပြည်းဒွင်းတာဝံခံမှာ ဇံ ဖြစ်ပြီး ယခိုင်တဦးဖြစ်ဖွယ်ရှိဂျောင်း ကြေညာသီ။
ခြံစည်းရိုး ခွထိုင်သူ ကတိန်မှဲ နှင့် မှာဃ အုကြေသွားသည် ဆိုခြင်း သတင်းမှားဖြစ်ပီး ၎င်းတို့ အဝှာလုပ်ပီး သောက်ရန် ဘောင်းဘီဖင် အိတ်ကပ်တွင် ထည့်ထားသည့် ကြက်ဥ ကြေမွသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပီအာရ်ရွေးကောက်ပွဲ ဟောဂိန်းဖြင့် လူသိမှား ထင်းရှာလာသူ အန်ဒီဖွတ် မှင်ခံကျော့မှ ဖျေရှင်းသီ။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ရွေးဂေါက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး (ဗျိတိမ်ဌာနဂွဲ) ဖွဲ့စည်းလိုက်ရာ အသင်းဥက္ကဌ နေရာအစား ဌက်ကထနေရာ ထားရှိရန် ဒေါ်မစာကလေးမှ အစိုတင်သွင်းသီ။
စစ်တပ်တွင် မှန်ခေါက်သူ ကပေ (ခ) သိုးစိမ်းအား လွှတ်တော်တွင်း တင်သွင်းသည့် စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေ လိုက်နာရေး ထင်မြင်ချက် တောင်းခံရန် ဖဘမှ စပ်သွယ်ရာ အကောင့်နာမည် ပြောင်းထားပီး ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံ၊ ၎င်းပုံပါ ပို့စများနှင့် နေရပ်လိတ်စာများပါ မရှိဒေါ့ကြောင်း တွေ့ယသီ။
ဒေါ်စုနှင့်ဒီမိုများအား ဆဲရေးတိုင်းထွာ၊ ရုန်ရင်းကြမ်းတမ်း ဖိုတိုရှော့ဓာတ်ပုံ ဖြန့်ချီ၊ ဝေငှခြင်းများ ပြုလုပ်သူ Mahar Myanmar အား နိုင်ငံရေး ခံယူချက် မေးမြန်းရာ အလိုတော်ယိ နေမျိုးဝေ၏ မတူကွဲဗြား ငြိမ်ခံရေးပါတီ အမာခံတဦးဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု ပဓါနဝါဒီ ဖြစ်ကြောင်း ဖြေစိုသီ။
ကာချုပ် မအလ မှ ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်းကို မြန်တျန့်တပ်တွင်း ပညာပေး ပိတ်ပင်သွားမြည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ကျေညာသီ။
ဗိုဂဒေါ်သာကူး အမည်ရှိ ရွာသူတဦး ပြည်သူ့ရင်ခွင် စုံကန်ကာ ဖက်ဆစ်အလံထူ သွားသဖြင့် တိုးတက်သိ အမြင်ရှိသူ ဂဇွတ်ရွာသားအပေါင်း တောက်တခေါက်ခေါက် ဖြစ်ဏေသီ။
ဂဇွတ်ရွာတွင် လူဒိုင်းအော့ကြောလံ တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီး အမည်မှံမှာ ဖုန်ကျားရှင် မဟုတ်ဘဲ ခြင်ကျားရှင် ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ဂျီးမှ သွေးလွန်တုပ်ကွေးပပျောက်ရေး အထိမ်းအမှတ်နေ့တွင် ထုပ်ပျံသီ။
ငွေရှင်ကြေးရှင်အား တိုင်းသူပြည်သား အလုပ်သမားထက် ပိုဦးဆားပေးရန် စော်ဩသူ နှစ်ဖက်ချွံခိုမ် အိမ်ဦးခန်းတွင် ဗကပဥက္ကဌ သခင်သန်းထွန်းဓာတ်ပုံ တွေ့၍မေးရာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အရပ်ဝတ်နှင့် ပုံမှတ်၍ ချိတ်ထားဂျောင်း ပြောသီ။
ပုန်းရည်ဂျီးခေါက်ဆွဲ လိမ်ရောင်း၍ ကျိကျိတက် ချမ်းသာသွားသူ မားနိုဂျီးက ဦးဖွတ်ကျားအား ဂျူ နိုလေးနှင့် မတူမတန်ဂျောင်း ထမီစွန်တောင်ဆွဲ ရန်တွေ့ရာ ခုံသမာဓိ ကြောင်ကြီး စိန်ပြေနှပြေ ထိုင်ကြည့်ဂဲ့သီ။
ကင်းကြောင်ပြာလေးတဦး မွေးဖွားလာဂဲ့ရာ ပညတ်သွားရာ ဓာတ်သက်ပါ စိုသော ရှေးစဂါး အလဂါး မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြနေသီ။
ဘာ မှတ်ချက်မှ ကို မပေးရဲဘူးးး
ခြံစည်းရိုးပေါ်ခွထိုင်တဲ့ ဟို ၂ ယောက် အကြောင်း ကျန်ခဲ့သလိုပဲ။
ကင်းကြောင်ပြာအကြောင်းး ပါမှ ပါပါ့မလား လို့
ဗျို့ က​ကြောင်​ဂျီးခီညား ​ကျေးမှုန်​ဂျီး ဘယ်​​ရောက်​သွားလို့လဲ ​ကျေးမုန်​ဂျီး အ​ကြောင်းမ​ပြော​ဒေါ့ပါဘူး ။
သပိတ်စုံ သူပုံထ ကြောင်တန်းစားပျက် ကျောင်ဏှာဂျီးသည်…
အရင်းရှင်ရင်ခွင်ကနေ တိုင်းပြည်ကို လေသိုင်းဖြင့် မီးတိုက်ရာ မအောင်မြင်ပဲ…
သပိတ်ကွဲ (လွတ်ကျလို့) သွားသဖြင့် ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ကာ…
မဲမဲမြင်ရာ လိုက်လံကုတ်ခြစ် ရန်စနေပါဂျောင်း…
ဗီယက်နမ် ကြောင်သားစွပ်ပြုတ်ဆိုင် ပို့လိုက်ရ… ဟီ ဟိ
.တွင်းမှံသမျှ ဘယ်တွင်းမဆို သြောင်းယံ ကျန်ဇီနေသူ ကျောင်ယောင်ဆောင်ဏေသော
.ကြွက် ဒဂေါင် ဂဇက်ရွာတွင်နေထိုင်ဂျောင်း ရွာသူားများ သဒိထားနေထိုင်ဂျရန်လိုဂျောင်း
.သတိပေးဇာ ရွာလယ်တွင်ကပ်ထားဂျောင်း နဇွန်နဖျားရပ်ကွက်မှ သိယသီ
ခွိ ခွီ ခွီးးး
ဟိ ဟီ ဟီးးး
ဂွိ ဂွီ ဂွီးးး
ဗြိ ဗြီ ဗြီးးး
စိ စီ စီးးး
အိ အီ အီးးး
ပိ ပီ ပီးးး
ညက်နှာညင် ကုတ်ခြင်ပါစေဆိုတဲ့ ဆု ကို လာတောင်းတာ။
အမည်သညာ ခေါ်တွင်ရာကား ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်း။ lo:-))))))
မြင်မှ မြင် ထွင်မှထွင် တတ်ပလေ။
သို့ပေသည့် သများမပါဘူးနော်။ အိမ်မပြန်ရ ဖြစ်နေဦးမယ်။ :D:D:D:D
အားလုံးရဲ့ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ဆိုတော့လည်း ရေးရဲတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား..